आज देखि नयाँ नोट साट्न पाउने, कहाँ-कहाँ पाइन्छ ? (सुची सहित) – MeroKhabarSathi
आज देखि नयाँ…
आज देखि नयाँ नोट साट्न पाउने, कहाँ-कहाँ पाइन्छ ? (सुची सहित)
यसवर्षको दसैंका लागि सर्वसाधारणले आज (शुक्रबार)देखि नयाँ नोट साट्ना पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाका अनुसार आजदेखि १७ गतेसम्म सर्वसाधारणले नयाँ नोट साट्न पाउने छन् ।
यस पटक एक व्यक्तिले १८ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म नयाँ नोट सटही गर्न पाउने छन्। नयाँ नोट ५, १०, २०, ५० र १ सय र ५ सयका नयाँ नोट सर्वसाधारणले पाउने छन् । थप नोट लिन चाहनेहरुका लागि पुराना तर सुकिला नोट उपलब्ध गराउने राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।
यसअघि गत वर्ष राष्ट्र बैंकले ५, १०, २०, ५० रुपैयाँ दरका नयाँ २–२ प्याकेट र १ सय रुपैयाँ दरका एक प्याकेट गरी जम्मा २७ हजार रुपैयाँसम्म प्रतिव्यक्ति सटही सुविधा दिएको थियो ।
कहाँ-कहाँबाट नयाँ नाेट साट्ना पाइन्छ ?
राष्ट्र बैंकका अनुसार उपत्यकामा २३ ठाउँबाट नयाँ नोट साट्न सकिने छ । नेपाल बैंकका सात वटा शाखाहरू, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका केन्द्रीय कार्यालयसहित १० वटा शाखाहरू, कृषि बैंकका छ वटा शाखाहरूबाट नयाँ नाेट साट्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएकाे छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार नेपाल बैंकका शाखा कार्यालयहरू न्यूराेड, कीर्तिपुर, महाराजगन्ज, जाेरपाटी, पाटन औद्योगिक क्षेत्र, लाजिमम्पाट र भक्तपुरबाट नयाँ नाेट साट्ने सकिने छ ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका शाखाहरू- सिंहदरबारप्लाजा केन्द्रीय कार्यालय, सिंहदरबार परिसर, टेकु, नयाँबाजेश्वर, सानाे थिमी, विशालबजार, नक्साल, बालाजु, लुभु र टाेखाबाट नयाँ नाेट साट्ना सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएकाे छ ।
त्यस्तै कृषि बैंकका शाखाहरू- गाैशला, गठ्ठघर, रमशहपथ, रत्नपार्क,थानकाेट र पुलचाेकबाट दसैंकाे लागि नयाँ नाेट साट्न सकिने छ ।
उपत्यकाबाहिर बिराटनगर, जनकपुर, वीरगन्ज, पोखरा, सिद्धार्थनगर, नेपालगन्ज र धनगढीका राष्ट्र बैंक कार्यालयबाट नयाँ नोट सटही हुनेछ। साथै नोटमा केरमेट तथा रङ लगाउने कार्य नगर्न राष्ट्र बैंकले सबैलाई आग्रह गरेको छ।
‘टेकम्याक्स ट्रेड प्रा लिको उद्घाटनमा मिस नेपाल श्रृङखला आउने
उपचारका लागि काठमाडौं ल्याइँदै गरिएका एक बिरामीको नौबीसेको जाममा फसेर मृत्यु